Akụkọ - Olee Udiri Mmanụ Mgbọ M Na-ada?
Email Nkwado sales01@chinahuimao.com
Kpọọ Nkwado + 86-0319-5250815
Igwe mkpuchi mkpuchi valvụ
Kedu Ofdị Mmanụ Mgbọ M Na-A ?ụ?
Chọpụta mmanụ kacha mma maka ụgbọ gị ma ọ bụrụ ihe sịntetik, ngwakọta sịntetik, akwa ma ọ bụ mmanụ dị iche iche, dabere n'ọtụtụ ihe. Somefọdụ bụ ihe ndị ọzọ dị ka mpụga, dị ka ihu igwe ị bi na ya, otú i si anya ụgbọala, ma ọ bụ ọbụna afọ injin gị. A na-edozi ihe ndị ọzọ dabere na ụdị injin ụgbọ gị yana nkọwa nke onye nrụpụta. Nke a nwere ike ịbụ karịa na ị chọrọ ịma banyere ụdị mmanụ eji na ụgbọala, ma hapụ ya ka Firestone Complete Auto Care na-enye gị ihe ọmụma zuru ezu banyere ụgbọ ala gị. Kwesighi ịbụ ọkachamara na mmanụ moto. ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a. Gaa na ma ọ bụ mee nhọpụta na agbata obi gị Firestone Complete Auto Care store taa. Ndị ọrụ taya anyị na ndị ọrụ ụgbọ ala na-adị njikere ijere gị ozi mgbe niile!
Ofdị Mmanụ Mmanụ
E nwere ụdị mmanụ mmanụ anọ zuru ezu:
Full Sịntetik Motor Mmanụ
Full sịntetik mmanụ bụ ezigbo maka ugbo ala na-achọ elu larịị arụmọrụ na elu-etoju nke lubrication. Mkpụrụ sịntetik zuru ezu na-enye ọkwa dị elu nke viscosity, iguzogide oxidation na nkwụsị ọkụ, ma na-enyere aka ịlụ ọgụ megide sludge mmanụ. Plus, ọ na-enyere aka melite mmanụ ụgbọala arụmọrụ na pụrụ ọbụna dịkwuo a ụgbọala si horsepower site na mbenata engine ikpuru.
Ebe ọ bụ na mmanụ moto sịntetik nwere ike iri abụọ ma ọ bụ okpukpu anọ karịa mmanụ oge niile, gwa onye ọrụ gị okwu ka ọ bụ ezigbo mmanụ maka ụgbọ ala gị. Ọ bụrụ na ị bi na ihu igwe nke nwere oke oyi ma ọ bụ oge anwụ na-ekpo ọkụ, ma ọ bụ jiri ụgbọ gị maka ịdọrọ ma ọ bụ ịdọrọ, mmanụ sịntetik nwere ike ịbụ ụdị mmanụ kachasị mma maka ụgbọ gị. Engineslọ ochie ga-eritekwa uru na mmanụ sịntetik, ebe ọ nwere ike inye aka gbochie mkpofu ahịhịa nke ụfọdụ injin ochie yiri ka ọ na-adịkarị mfe.
Sịntetik Ngwakọta Motor Oil
Sịntetị ngwakọta mmanụ na-enye ihe kachasị mma nke ụwa abụọ. O nwere ọtụtụ njirimara nke mmanụ sịntetik zuru ezu, mana na ọnụahịa dị ala karị. Typedị mmanụ a bụ ngwakọta nke mmanụ sịntetik na nke isi, tinyere ụfọdụ ihe mgbakwunye, maka mmezi na-eguzogide oxidation na ezigbo ọnọdụ okpomọkụ. Ngwakọta sịntetik na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ọkwọ ụgbọala ka ịgbanwee site na nke mbụ na mmanụ sịntetik, nke mere na ụdị mmanụ a na-ewu ewu n'etiti ndị ọkwọ ụgbọ ala taa. Ọ bụkwa nnukwu ala maka ndị ọkwọ ụgbọala chọrọ nchedo agbakwunyere na arụmọrụ nke mmanụ sịntetik, mana ọ nwere ike ọ gaghị adị njikere ịkwụ ụgwọ ahụ maka ngụkọta mgbanwe gaa na mmanụ zuru ezu.
Ngwongwo Mmanụ Ahịa
Mmanụ a na-agba agba bụ ụdị mmanụ a na-ejikarị. Ọ dị mma maka ọkụ ụgbọ ala, nke oge mgbụsị akwụkwọ nwere obere agbara na ọkara na nha ụgbọ ala dị mfe.
A na-ahazi mmanụ dị elu maka ụgbọ ala nwere ihe karịrị 75,000 kilomita. Typedị mmanụ a nwere ike inye aka belata mmanu mmanụ, belata mbenata mmanụ na mmanụ, yana nwekwara ike inye aka belata anwụrụ ọkụ na anwụrụ ọkụ na injin ochie.
Pesdị ihe mgbakwunye mmanụ
Mmanụ mmanụ na-agụnyekarị ihe ole na ole nwere ike ime n'etiti 5% na 30% nke mmanụ. Ihe mgbakwunye ndị a na-enyere aka mee ka arụmọrụ mmanụ dịkwuo mma. Mmanụ moto nwere ike ịgụnye ihe mgbakwunye ndị a:
Antioxidants: Ihe ndị na-eme ka antioxidant na-arụ ọrụ iji kwụsịlata oxidation na ịmalite ịdebe ego na mmanụ ụgbọ ala. Ha na-enye aka mee ka injin dị ọcha ma dị ogologo ndụ mmanụ moto.
Ihe ndị na-eme ka ndị uwe na-eyighị uwe: Ndị na-emegide eyi na-enyere aka ichebe akụkụ nke injin ahụ nke nwere ike ịla n'iyi site na oke okpomọkụ, dị ka mgbidi cylinder, ndị na-ebuli elu, cams, na mgbaaka pistin. Ihe mgbakwunye a na-eme dị ka akwa nchekwa gburugburu ihe ndị a iji belata esemokwu na ọnọdụ metal-on-metal.
Ngwa: Ihe mgbakwunye a adịghị ka ihe ị na-asa akwa! Ọ na-elekwasị anya na igbochi nkwụnye ego, nchara, na nchara nchara site na mpaghara mgbanaka piston, okpueze okpueze piston, na ebe ndị ọzọ na-adịkarị ọkụ.
Dispersants: Nke a bụ mmanụ gị si anwansi mgwa. Ọ na - enye mmanụ gị ike ịmị ma jide mmetọ siri ike ka ha ghara imebi injin ahụ.
Ndị na-egbochi ụfụfụ: Ihe mgbakwunye a na-eme ihe ọ dị ka ọ dị. Ndị na-eme ụfụfụfụfụ na-egbochi mmanụ moto ka ha na-akpụ ụfụfụ ma na-egosipụta afụ. Ọ bụrụ na ụfụfụ na afụ amalite, mmanụ ahụ agaghị enwe ike ichie akụkụ ndị dị mkpa nke injin ahụ ma mee ka ọ dị jụụ.
Esemokwu na-enyere aka belata esemokwu mgbe injin gị na-arụ ọrụ n'okpuru oke okpomọkụ yana nnukwu ibu. Ihe mgbakwunye a nwekwara ike inyere gị aka imeziwanye arụmọrụ mmanụ gị.
Ndị na-ada mbà n'obi: Ihe mgbakwunye a enweghị ihe ọ ga - eme iji wụsa mmanụ gị. N'ezie, ndị na-ada mbà n'obi na-enyere aka igbochi irighiri ihe ndị dị na mmanụ site na ime ka ọnọdụ obi sie ike. N'ihi ya, mmanụ ụgbọ ala na-aga kpamkpam ọbụlagodi na obere oyi, oyi na injin adịghị mkpa ịrụ ọrụ ọ bụla karịa iji kpoo ya.
Rust na corrosion inhibitors: Akụkụ injin gị nwere ike ịka nchara na mebie mgbe ekpughere ya na mmiri. Ihe mgbakwunye ndị a mepụtara ihe nchekwa karịa akụkụ nke injin gị iji nyere aka gbochie mmebi ahụ.
■ Viscosity-index improvers: Ihe ndị a na-enyere mmanụ injin gị aka ịrụ ọrụ dị ka ebumnuche n'agbanyeghị mgbanwe mgbanwe okpomọkụ.
Post oge: Apr-20-2021
Xingtai Huimao Trading Co., Ltd. bụ a professinal emeputa na soplaya na akpaaka akụkụ ahụ mapụtara. Anyị factory emi odude ke Jvlu Industrial Mpaghara, Xingtai City, Hebei Province, ụtụtụ na n'ichepụta ubi nke roba akara akụkụ na akpakanamde mmanụ, dị ka mmanụ akàrà, O yiri mgbaaka, gaskets, bushes, engine mmanụ, mmanu mmanu, wdg.
Ihe dị iche n'etiti Halogen, Zoro A ...
Achọrọ M Mmanụ Milega Dị Elu?
Silicone Rubber Akara, Akụkụ mapụtara, Control Ogwe aka Bushing, Auto ngwa, Akara Nkebi, Mmechi mmewere,